Sceneries pa Rikoooo vari haanzi zvaitika, pane kurigadzirisa? (Win 7 / 8 +) Maitiro aya anoshanda pane ese ari maviri Prepar3D uye FS2004.By default, FSX yakaiswa mu «C: \_ Chirongwa Mafaira (x86) \_ Microsoft Mitambo \_ Microsoft Flight Simulator…
Maitiro aya anoshanda pane ese ari maviri Prepar3D uye FS2004.
By default, FSX yakaiswa mu «C: \_ Chirongwa Mafaira (x86) \_ Microsoft Mitambo \_ Microsoft Flight Simulator X». Dambudziko nderkuti paWindows 7 uye 8 + kana kunyange Windows 10 hauna dhairekitori yakazara yemafaira mukati «Microsoft Flight Simulator X», iyo inodzivirira chirongwa kubva pakunyora mufaira rekugadzirisa. Kugadzirisa dambudziko irori, enda ku «C: \_ Chirongwa Mafaira (x86) \_ Microsoft Magemhu», wozoita bhatani kurudyi pane dhairekitori «Microsoft Flight Simulator X», tinya «Zvivakwa», uye ipapo pa «Chengetedzo» tab. Pano, sarudza «Vashandisi (xxxxxx)», wobva wadzvanya pa «Gadzira». Muhwindo richangovhurwa, sarudza zvakare «Vashandisi (xxxxxx)», tinya pa «Kuzara kwekutonga», ipapo «Moditions». Iye zvino, iwe unofanirwa kungotarisa pa «Zvakanaka» uye Windows ichagadzirisa mvumo.
Instructions mune mifananidzo pazasi:
Iyo mageji haioneke mu cockpit yeB777 yangu. Ndoita sei ? (FSX/P3D) Iyo geji Boeing777-300.gau, yekutanga yakagadzirirwa FS2004, haishande mukati FSX pasina yakatarwa DLL Kugadzirisa dambudziko iri, unofanirwa…
The geji Boeing777-300.gau, yekutanga yakagadzirirwa FS2004, haishande mukati FSX isina yakatarwa DLL
Kuti vagadzirise dambudziko iri, unofanira kutevedzera namatidza ari DLL « msvcr70.dll »In FSX's main folda (C: \_ Chirongwa Mafaira (x86) \_ Microsoft Mitambo \_ Microsoft Flight Simulator X). Kana iwe uine nyaya imwecheteyo pa Prepar3D, iyi mhinduro inofanirawo kushanda. Zvakangodaro, hatisati tambozviyedza P3D.
Zvimwe zvekuwedzera zvangu zviri pachena kana grey (zvisina kuchena). Ndoita sei ? (FSX SP2 / kukurumidza) Chimwe chinhu chakakosha, kana iwe uine yako yekuwedzera iyo 3D modhi yakagadzirirwa FS2004 asi yakashandiswa mukati FSX SP2 (inonzi zvakare…
Chimwe chinhu chakakosha, kana iwe uine yako yekuwedzera iyo 3D modhi yakagadzirirwa FS2004 asi yakashandiswa mukati FSX SP2 (iyo inonziwo Port pamusoro), ndeyekuita basa rekuona iyo Preview DirectX 10 muzvimiro zve FSX. Muchokwadi, FS2004 addons haina kuwirirana neDirectX 10.
Muenzaniso 1: A chikamu ndege asingaoneki.
Muenzaniso 2: Mapapiro kana ndege vari asingaoneki.
Muenzaniso 3: The ndege zvachose kuchena, pasina unaku.
Kugadzirisa: Deactivate DirectX 10 pfupiso.
Ndege yangu inobhuroka pandakachinja maonero. Ndoita sei ? (FSX) Zvimwe zvema ndege ako zvinoputika padenga, uye zvimwe chetezvo zvinoitika kune motokari dzakapoteredza: iyo chirwere chinonyatsozivikanwa, ...
Dzimwe dzemhepo ndege dzako dzinodhonzera pane tarmac, uye zvakafanana zvakafanana zvinoitika kumota dzakatenderedza: icho chinozivikanwa bug, chinogona kugadziriswa nekushandura «Mesh Resolution» kusvika 5m yakakwira. Mune Display Zvirongwa zve FSX, tinya pane iyo «Scenery» tab uye shandura gadziriso sezvakaratidzwa pasi apa:
FSX iri kuputika kana ichimhanya Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10-64 mukubhururuka kwemahara uye MP Septs. Pane kugadzirisa here? Nyaya yacho yakagadzirirwa mumatanho maviri ari nyore: Chikwata 1: Chengeta UIAutomationCore.dllStep 2: Chengeta ZIP file uye isa ...
Nyaya ndee matanho maviri nyore:
Danho 1: Download UIAutomationCore.dll
Nhanho 2: Bvisa iyo ZIP faira uye isa iyo yakadzoserwa UIAutomationCore.dll mune mudzi weyako FSX kuisirwa folda uko faira fsx.exe anogara. Ita chokwadi FSX haisi kumhanya.
Mushure mekuita uku, tanga FSX uye iwe uchaona izvo zvinoshandura maonero mukati FSX, haichazopedzisira yakonzera FSX kuparara.
Pasina kugadziriswa uku, FSX inonamira pamwe nekuti iwe ucha "kupedzerwa nguva" muchikamu chevatambi chakawanda. Usashandise chero dzimwe shanduro dzeUIAutomationCore.dll, nekuti iyi vhezheni ndiyo yega shanduro inomisa kupaza.
How yokugadza FSX paWindows 8 / 8.1 / 10? Kuisa FSX (ese mavhezheni) paWindows 8 / 8.1, tevera nhanho idzi: 1- Isa FSX kazhinji neDVD.2- When the…
Kuisa FSX (ese mavhezheni) paWindows 8 / 8.1, tevera nhanho idzi:
1- Isa FSX kazhinji neDVD.
2- Kana iko kuiswa kwapera, kurudyi tinya pa « fsx.exe »(unogona kuiwana pano: C: \_ Chirongwa Mafaira (x86) \_ Microsoft Mitambo \_ Microsoft Flight Simulator X). Pano, sarudza «Kuenderana» tab uye kumisikidza hwindo sezvakaratidzwa pasi apa:
3- Download 32 nematomhu shanduro « UIAutomationCore », Unzip iyo faira uye riise mukati FSX's main folda (C: \_ Chirongwa Mafaira (x86) \_ Microsoft Mitambo \_ Microsoft Flight Simulator X \_). Ichagadzirisa dambudziko rekukanganisa kusatarisirwa kwe FSX.
Zvino, mushure mematanho madiki aya, FSX inofanirwa kunge yakagadzikana paWindows 8 / 8.1 uye 10
Ndezvipi FSX SP1 uye SP2? SP inomiririra Service Pack 1 kana 2, iri patches ichivandudza FSX. Ivo varipo mushure memutambo waburitswa.Flight Simulator…
SP inomiririra Service Pack 1 kana 2, iri patches ichivandudza FSX. Ivo vanowanikwa mushure memutambo waburitswa.
Flight Simulator X Service Pack 1 (Dzvanya kuti utore) Anoruramisa dzinotevera nhau inowanikwa nevatengi pashure game asunungurwe:
• Activation uye Installation
• Matambudziko chokuita nokushandiswa kwevamwezve zvinoriumba
• Improvement maitiro
• Matambudziko chokuita zvirimo
Flight Simulator X Service Pack 2 (Dzvanya kuti utore) Anovandudza zvinotevera mabasa:
• Multiplayer kugarisana
Unofanira kuisa Service Pack 1 (SP1), pamberi wechipiri chete.
Ndingaziva sei kuti FSX Shanduro yakaiswa pakombuta yangu? FSX-SP1, SP2 kana Kukurumidza? Kuziva kuti ndechipi shanduro ye FSX yakaiswa pakombuta yako, zviri nyore: Kutanga FSX, uye tanga kubhururuka chero kwaunoda…
Kuziva kuti ndechipi shanduro ye FSX yakaiswa pakombuta yako, zviri nyore: Kutanga FSX, uye tanga kubhururuka chero kwaunoda, ne chero ndege yaunoda. Zvino, pamusoro pechidzitiro chako, vhura iyo menyu bar (kana isati yatovhurwa) uye tinya pa «Rubatsiro» kurudyi. Pano, tinya pane «About». Iwindo rinotevera rinooneka pamwe neshanduro yako FSX:
Sei uninstall zvachose munhu Rikoooo wedzera-mberi? Zvose zvinowedzera kubva kuRiooooo zvinogona kubviswa nenzira imwecheteyo: Ino inoshanda paWindows Vista, 7, 8 uye 10.Kana ...
All wedzera-wanda kubva Rikoooo inogona uninstalled zvakafanana:
Izvi zvinoshanda pamusoro Windows Vista, 7, 8 uye 10.
On the pakombiyuta, tinya « Start Menu », Ipapo« Chirongwa All »Uye kuenda« Rikoooo Add-wanda »
forodha. Kana iwe tinya pairi, uchaona mazita kuwedzera-wanda waita yakaiswa pa-computer yako. Zvino, iwe chete
kusarudza munhu uchida uninstall.
Other nzira, kubva Control Panel pamusoro Windows vanosarudza Zvirongwa uye Features zvino iwe uone zvako zvose zvirongwa yakaiswa, sarudza munhu uchida uninstall.
Varipi emirayiridzo, ReadMe.txt, Copyright etc Kubva kubva ku-self-installers version 10 kana + zvose zvinyorwa zvinowanika muMadokori zvangu faira kana Zvinyorwa zvinobva pa Windows yako ...
Kubva car-installers shanduro 10 kana + documentations vose riri My Documents forodha kana Documents kwakavakirwa wako Windows Bhaibheri.
Tevedzera matanho ichi kubva car-installer kudzika pane shanduro 10:
On the pakombiyuta, tinya « Start Menu », Ipapo« Chirongwa All »Uye kuenda« Rikoooo Add-wanda »Forodha. Kana iwe tinya pairi, uchaona mazita kuwedzera-wanda waita yakaiswa pa-computer yako.
Ohter nzira, uchaona zvose zvaisanganisira mapepa ari mudzi forodha yenyu kuwedzera-wanda, exemple: C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight Simulator X \_ SimObjects \_ ndege \_ xxxx \_
Ini handikwanise kuwana «Preview DirectX 10» bhokisi mumamiriro e FSX. Ndoita sei ? Kutanga, tarisa kuti unazvo FSX-SP2 yakaiswa pakombuta yako. Chokwadi, iyo «Ratidziro DirectX 10» inongoonekwa kana iwe…
Kutanga, tarisa kuti unazvo FSX-SP2 yakaiswa pakombuta yako. Chokwadi, iyo « Preview DirectX 10 »Inongoonekwa chete kana iwe waisa iyo SP2 chigamba kana uine FSX Kukurumidza kana FSX Ndarama kana FSX Steam Edition.
Vamwe zvinokosha gauges kana Marwadzo zvisipo. Ndoita sei ? Apo zvakawanda zvekugadziriswa zvakaitwa mu "Gauge" folder, zvinowanzoitika kuti chikamu ...
Kana dzakawanda shanduko dzaitwa mu «Gauge» danda, zvinowanzoitika kuti chikamu chema hwaro mafaira chisipo. Muchiitiko ichocho, kana yekuwedzera inoda iwo mafaera, haakwanise kuratidza iyo maji mukati mupaniki. Kazhinji mhinduro ine mukudzokorora FSX. Kuti udzivise kudzokorora FSX, unogona kurodha Gauge pora, Ndiro duku chirongwa akasikwa Rikoooo kuti achadzorera yepakutanga faira ose kubva «Gauges» uye «Zvinozovapo» folders.
Gadziridza 13 / 02 / 2014: A Prepar3d Shanduro iri kugadzirwa.
Prepar3D v2 uye v3: Mvura kubva ku sceneries nemabhichi ine rima rakanyanya, ini handisi kuona iyo yakachena mvura yakajeka. Iri dambudziko rinokonzerwa nekumiswa kweiyo basa Hardware Tessellation mune graphic gadziriro ye Prepar3D v2 kana…
dambudziko iri anokonzerwa activation ari basa Hardware Tessellation mune graphic gadziriro ye Prepar3D v2 kana v3.
Heino tichienzanisa girl Seychelles Photo Real Scenery Pack avalaible pano :
With Hardware Tessellation kwakaita
Pasina Hardware Tessellation kwakaita
Sezvaratidzwa pamusoro apa enzaniso, waipedza basa Hardware Tessellation kugadzirisa dambudziko.
Mushure mekuita deactivation unofanira kutangazve Prepar3D kuti kugadzirira kuitike.
Chishanu Chishanu 20 by rikoooo
Sceneries haisi kungo gadziriswa ne Prepar3D v4. Ini ndinowana message yekukanganisa pandinovhura P3D Vashandisi vezvitsva Prepar3D v4: Kutevera kuchinjika charset mu Scenery.cfg kusvika UTF-16LE iyo auto-installers haichakwanisi kugonesa ...
Vashandisi vezvitsva Prepar3D v4: Kutevera kuchinjika charset muScenery.cfg kusvika UTF-16LE iyo auto-installers haichakwanise kugonesa nzvimbo yako pachako.
Kugadziriswa kwechinguvana: Vhura iyo folda C: \_ ProgramData \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4 wobva wavhura iyo faira Scenery.cfg ine Notepad wobva wadzvanya Faira - Chengetedza Sa ... Muwindo rinovhura sarudza UTF-8 mundima ye Encoding (ona mufananidzo pazasi) uye tinya Nyora.
Uku kugadzirisa kunofanirwa kudzokororwa kune yega yega nzvimbo yekuisa nekuti P3D sevha zvakare iyo Scenery.cfg faira iri UTF-16LE mushure mekuvhura kwega kwega.
Pandinochovha pane bhodhi rekubudisa hapana chinoitika, chii chaunofanira kuita? Iwe wakamirira asi hapana chinoitika, hapana faira inotorwa, zvichida mushure memaminitsi mashoma ekumirira unogamuchira kukanganisa ...
Iwe wakamirira asi hapana chinoitika, hapana faira inotorwa, zvichida mushure memaminitsi mashomanana ekumirira unogamuchira mhosho yemashoko e "Type Connection time" kana "ERR_EMPTY_RESPONSE" kana mamwe mhete maererano neInternet browser.
Zvechokwadi, zvinyorwa kubva kuRiooooo zvinotumirwa kubva kune imwe nzvimbo yepanzvimbo pane chikwata 8888 (ex http://download.rikoooo.com:8888) ichi kuti ugadzikane zviri nani zvekutsvaga kunyanya nemafuta eGigabytes akawanda.
Dambudziko nderokuti moto wemoto we router (ex Livebox, Freebox, Neufbox) yevamwe vashandisi yakagadzirirwa kuramba chikepe 8888 (uyewo chikepe 8080), kuziva kana uri munyaya iyi, enda kune Simviation.com uye download chero faira chero ipi zvayo, kana kuregera kusatanga (kufanana neRiooooo), iwe uri pakati peavo vashoma muzana yevashandisi vane router vanovhara ganda 8888 (uye 8080 yeSimviation). Iko mahofisi anowanzoshandiswa kwehutano hwehutano, kutumbuka, uye HTTP, saka, yakachengeteka kuzarura.
Unofanirwa kubatanidza router yako (ex Livebox) uye wedzera mutemo unozarura chikwata che 8888 TCP / UDP.
Pano pane zvinyorwa kune zvimwe zvinyorwa zveChirungu zvinotsanangura nzira yekuzarura mazambuko ako, usanonoka kuita tsvakurudzo yako paGoogle uchishandisa zita reInternet service provider sechinhu chinokosha.
Link to Youtube mavhidhiyo ane mazano akawanda (add your Internet service provider as keyword)
Musi woMugovera March 03 by rikoooo
Sei danda riri kuchikwama wangu? Zvinonyatsokosha kuti uise paakaunti yako kuti unakidzwe nemabasa edu ose. Kuti uite ...
musi woMugovera August 08 by rikoooo
Sei kuchinja Password wangu? Chinhu chokutanga chaunofanira kuita ndechokuti upinde kuaunti yako uchishandisa modha yekutengesa kusvika kumusoro. Dzvanya ...
Chinhu chokutanga kuita danda muna kuchikwama chenyu kushandisa chatiri module kumusoro. Click on «Edit nokuda kwangu».
Zvino, unotofanira kupinda password itsva kaviri, muminda pasi apa. Zvadaro, tinya «Kuzviisa» kuti aponese okunatsiridza.
Ndakakangamwa pasiwedhi yangu uye / kana yangu Username. Ndoita sei ? Kana wakakanganwa iwe password uye / kana zita rako rekushandisa, kune zvigadzirwa zvaunogona kushandisa kuti uwanezve mashoko aya: Ndakakanganwa ...
Kana wakanganwa iwe pasiwedhi uye / kana wako Username, pane maturusi ungashandisa dzosa Informations izvi:
Ndava kukanganwa pasiwedhi wangu
Ndava kukanganwa Username wangu
Kana uchiri usingagoni kuwana nhoroondo yako, isu runhare kuitira kuti tigone kuita zvakakodzera okunatsiridza: Taura nesu.
Jumbo chipeto yangu kusashanda, asi Download rangu kumhanya richiri zvishoma - Kutanga, chengeta kuti mutemo we "Jumbo OK" unoiswa panzvimbo yepamusoro yewebhu yewebsite ...
- Kutanga, ongorora kuti Statut « Jumbo OK »Inowanikwa munharaunda yepamusoro yakakwirira yewebsite yakadai sezasi:
Kana ukaona «- Statut: No Jumbo », Rinoreva kuti yako Jumbo chipeto haina kusashanda. Edza reconnect kuchikwama chenyu, uchishandisa «Log out» bhatani. Zvinofanira Activate yenyu Jumbo chipeto.
- Kana ukaona mutemo " Jumbo OK », Asi yako yekudhura kasi haisi yakakwirira kupfuura 220ko / s, zvino tarisai kuti bandwidth yako hainonoki nedzimwe mapurogiramu ari kuedza kutora panguva imwe chete.
- Mushure mekushanda kweJumbo yako tapota ona kuti uchitangazve zvinyorwa zvako zvave zvichienderera mberi, Jumbo URLs ichachinja.
- Unofanirwawo kuongorora kuti internet yako yekutengesa inokubvumira kuita hurukuro yakakurumidza. Zvinogona kudikanwa kuedza kune imwe kombiyuta uye imwe yeIndaneti inopindirana kuti uone kuti dambudziko harina kubva pakombiyuta yako.
- Kuti uwedzere iwe kukopa kukwira kufadza, isu ndikurayire kukopa uye kuisa FlashGet, inova yepachena chirongwa kubvumira kuti muwande Download wako kumhanya kusvikira 10 nguva. Unogona kuwana zviri pano: http://www.flashget.com